ဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
ဒီနည်းကို SITE ကိုအသုံးမပြုခင်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပါ။
ဒီ website တွင်အဆိုပါပစ္စည်းများပါ ( "ဆိုက်ကို") က၎င်း၏အသင်းဝင်များအဘို့အနည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး, non-profit organization ကိုတည်ထောင်သူ, (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) ကထောက်ပံ့ပေးနေကြသည်နှင့်သတင်းအချက်လက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လူပျိုမိတ္တူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြဋ္ဌာန်းချက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီဆိုက်ကိုထံမှမည်သည့်ပစ္စည်းများဒေါင်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤဝေါဟာရများကိုသဘောတူသည်။ သငျသညျထိုသူတို့အားသဘောမတူဘူးလျှင်, ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကနေမဆိုပစ္စည်းများဒေါင်းလုဒ်မဆွဲကြဘူး။
နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးနှင့် The ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ပိတ်ပင်၏အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်နေကြပြီး, နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအများ၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုအားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်, အမည်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြပြီးပိတ်ပင်နေဖြင့်တိကျသောခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။
ဒီဆိုက်ကိုပေါ်တွင်ပစ္စည်းများမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နေကြသည်, ဤဆိုက်ကိုအပေါ်မည်သည့်ပစ္စည်းမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းကိုမူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဥပဒေများချိုးဖောက်စေနိုင်သည်။ အထူးသဆိုလိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကိုအားဖြင့်အရေးအသားဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုအဖြစ်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်မဟုတ်ရင်လုပ်ဖို့လိုင်စင်မဟုတ်လျှင်သငျသညျကိုသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ရယူထားရတာ, ပြည်တွင်းရေးအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပိတ်ပင်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက် ( "Materials") ၏တဦးတည်းမိတ္တူကို download လုပ်ပါစေခြင်းငှါ အတူလိုက်ပါသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းများနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ ဒါကလိုင်စင်မဟုတ်ဘဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုလွှဲပြောင်းဖြစ်ပြီးအောက်ပါကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်: သင် (က) ပစ္စည်းများပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အများပြည်သူ Display, စွမ်းဆောင်ရည်, ရောင်းချ, သို့မဟုတ်ငှားရမ်းအဘို့ထိုသူတို့မသုံးမည် (ခ) မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းများအခြားစီးပွားဖြစ်သတိပေးချက်များကိုဖယ်ရှား; (ဂ) အခြားသူတစ်ဦးရန်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်း။ သင့်အနေဖြင့်ပစ္စည်းများမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကူးယူခြင်းမှတားဆီးရန်သဘောတူသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းများမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်စာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်။ သူတို့ကပြုပြင်ထားသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, အပ်လုဒ်တင်ပြီး, posted, မှတဆင့်ကူးစက်သော, ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်ရဲ့ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်လမ်းအတွက်ဖြန့်ဝေ, ပွားကူးယူမည်မဟုတ်ပါ။ အဖြစ်ဖော်ပြဤနေရာတွင်ပေး မှလွဲ. ပိတ်ပင်မဆိုအမြန်ပေးသနားပါဘူးသို့မဟုတ်မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်, မူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်, သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်သတင်းအချက်အလက်အောက်မှာညာဘက်ကိုသင်ဆိုလို။ အခြားအခွင့်အရေးများအရေးအသားအတွက်ပိတ်ပင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများအတွက်တခြားနေရာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ပိတ်ပင်အသိပေးစာမပါဘဲအချိန်မရွေးဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် သိ. ဆိုသောအဘို့ကိုရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်အဆုံးသတ်ခြင်းမှ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိ, ဒီသဘောတူညီချက်နယူးမက္ကစီကို၏ပြည်နယ်၏ဥပဒေများကအုပ်ချုပ်သည်ကိုသင်ဤဥပဒေအားလုံးအငြင်းပွားမှုများထဲကပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်ဆိုဒ်၏အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်နယူးမက္ကစီကိုတရားရုံးများ၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့်နေရာသဘောတူ ။ ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုဤအပိုင်းကို, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်ဤသတ်မှတ်ချက်များအပေါငျးတို့သပြဌာန်းချက်မှအကျိုးသက်ရောက်မပေးပါဘူးဆိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်နောက်ဖက်စပ်, မိတ်ဖက်, အလုပ်အကိုင်, ဒါမှမဟုတ်အေဂျင်စီဆက်ဆံရေးမျိုးဆိုက်၏ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သင်နှင့်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအကြားကရှိကွောငျးသဘောတူသည်။ ဒီသဘောတူညီချက်ပိတ်ပင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်, ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါရှိသောဘာမျှမပေးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအစိုးရမဟုတ်သော, တရားရုံးနှင့်ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေး requests သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာဖို့ပိတ်ပင်၏လက်ျာ၏ derogation ၌တည်ရှိ၏ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်စုဝေးစေတော်မူ၏။ ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုစိတျအပိုငျးမြားအပါအဝငျသက်ဆိုင်သောဥပဒေမမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ညီဖြစ်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, အအာမခံအကြောင်းသတိပြုစရာများနှင့်တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်အထက်ထွက်မသတ်မှတ်လျှင်မမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ပြဋ္ဌာန်းချက်ခိုင်လုံသော, အတည်ပြုပြဌာန်းချက်များကအစားထိုးယူဆပါလိမ့်မည် ကြောင်းအများဆုံးနီးကပ်စွာမူလပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လိုက်ဖက်နှင့်သဘောတူညီချက်၏ကျန်ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆက်လက်ရလိမ့်မည်။
မဟုတ်ရင်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်လိုက်သောမဟုတ်လျှင်, ဒီသဘောတူညီချက်ဆိုက်မှလေးစားမှုနဲ့အတူအသုံးပြုသူနှင့်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအကြားကတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်ဥပဒေနှင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသုံးစွဲသူနဲ့ပိတ်ပင်ဆိုက်အကြား, အီလက်ထရောနစ်ပါးစပ်သို့မဟုတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖြစ်စေ, အားလုံးကြိုတင်သို့မဟုတ်ခေတ်တစ်ခေတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အဆိုပြုချက််ယူ။ ဒီသဘောတူညီချက်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပုံစံ၌ပေးသောမည်သည့်အကြောင်းကြားစာ၏တစ်ဦးကပုံနှိပ်ဗားရှင်းအပျေါ၌အခြေစိုက်သို့မဟုတ်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့တူညီသောအခြေအနေများတူညီသောအတိုင်းအတာနှင့်ဘာသာရပ်ဤသဘောတူညီချက်နှင့်စပ်လျဉ်းတရားစီရင်ရေးသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားစွဲဆိုမှုအတွက်လက်ခံနိုင်သောဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်မူလကအတွက်ထုတ်ပေးနှင့်ထိန်းသိမ်းထားမှတ်တမ်းတင် ပုံနှိပ်ပုံစံ။ ဒီသဘောတူညီချက်အပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခံရသောပါတီများဖို့အမြန်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်, SOFTWARE, ထုတ်ကုန်များ, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်သို့မဟုတ်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်ရနိုင်သောတိ OR သတ်ပုံအမှားများပါပါဝင်နိုင်ပါသည်ပါဝင်သည်။ အပြောင်းအလဲများကာလသတင်းအချက်အလက်များဤနေရာတွင်ထည့်ပေါင်းတယ်။ နည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဘ်ဆိုဒ်ပြောင်းလဲမှုများစေ။
နည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းသင့်လျော်သော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, Available, အချိန်မီ, နှင့်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှု, SOFTWARE ဆို PUROSE FOR Website တွင်ပါရှိသောထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ် graphics အကြောင်းကိုယ်စားပြုခွင့်မရစေသည်။ Applications ဥပဒေမှခွင့်ပြုအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိ, အားလုံးထိုအချက်အလက်များ, SOFTWARE, ထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ် graphics မဆိုကြင်နာမှုအာမခံ OR CONDITION မရှိဘဲနဲ့ "IS AS" ပေးပါသည်။ နည်းပြဤဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းသီးခြားရည်ရွယ်ချက်, TITLE နှင့် Non-ချိုးဖောက်မှုအတွက် Fitness, ကုန်သည်အားလုံးအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံ OR အခြေအနေများအပါအဝင်, ဒီအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံးအာမခံနှင့်အခြေအနေများကို, SOFTWARE, ထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ် graphics, DISCLAIMS ။
အဆိုပါဆက်နွယ်နေဆိုဒ်များနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအများ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအဆိုနှင့်ဆက်စပ်ဆိုက်ကိုသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက်ကိုတွင်ပါရှိသောမည်သည့်လင့်ခ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ပိတ်ပင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလင့်ခ်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပိတ်ပင်က၎င်း၏ဝဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ကဲ့သို့သောမှတ်သားခွင့်ခ်နှင့်ရှိသည်သောကုမ္ပဏီများမှသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်ဤဆိုက်ကိုဆက်စပ်သည့် Third-party ဆိုဒ်များမဆိုဝင်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒါလုံးဝလုပ်ပါ။
ဤသည်ဆိုက်ကိုအမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းက၎င်း၏ရုံးခန်းကနေပိတ်ပင်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ပိတ်ပင်ဆိုက်အတွက်ပစ္စည်းများသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမကိုယ်စားပြုမှုစေသည်, သူတို့ရဲ့ content တွေကိုတရားမဝင်ရှိရာနယ်မြေကနေသူတို့ကို access ကိုတားမြစ်သည်။ သည်အခြားနေရာများတွင်မှဤဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရှေးခယျြသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပဏာမခြေလှမ်းအပေါ်အဲဒီလိုနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုတာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျကိုအမေရိကန်ပို့ကုန်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်အတွက်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါသို့မဟုတ်တင်ပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းမဆိုပြောဆိုချက်ကိုမက်ဆာချူးဆက်၏ဓနသဟာယ၏ပြည်တွင်းရေးထိရောက်သောဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ခံရကြလိမ့်မည်။ ပိတ်ပင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထူးချွန်နည်းပြ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်များအတွက်ရပ်တည်ရန်၎င်း၏မစ်ရှင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ထူထောင် non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ (www.certifiedcoach.org ကြည့်ပါ)
ပိတ်ပင်ဒီပို့စ်ကို update များကမည်သည့်အချိန်တွင်ဤသတ်မှတ်ချက်များပြင်ဆင်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်အပေါ် binding ကြောင့်သင်အချိန်ကနေပြီးတော့လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်ဤစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များအခြို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်ဤဆိုက်ကိုမှာအထူးသဖြင့်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသောဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များသို့မဟုတ်ဝေါဟာရများအားဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
နည်းပြ, LLC ၏မူပိုင်ခွင့်© 2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းမှ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။